एक करोड ८ लाख शेयर पूजी सहित, प्रदेश १ मा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता :: Sahakari Akhabar
२०७८ असार १० गते , विहीवार Sahakari Akhabar
काठमाडौं । प्रदेश नं १ मा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्धारा प्रर्वद्धित पहिलो थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघ दर्ता भएको हो ।
प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश १ सहकारी रजिष्ट्रार वलराम निरौलाले निजी व्यवसायीसंगको प्रतिस्पर्धालाई सहकारी क्षेत्रमा विशिष्टीकृत संघले गतिलो सहारा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
विशिष्टीकृत संघका अध्यक्ष महेन्द्र गिरीले तीन महिना भित्रमा प्रदेश नं. १ मा सहकारीमार्फत दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु उपभोक्ताविच सहज र सुपथ मूल्यमा पुर्याउने बताए । प्रदेश नं. १ का ३१ वटा विभिन्न संस्थाहरुबाट १ करोड ८ लाख शेयर पूजी संकलन गरी संघ दर्ता भएको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को वजेटमा उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृखला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलव्ध गराउने उल्लेख छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै शेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । पहिलो पटक सहकारी महासंघको थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी संघ प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन भएको हो।
यस अघि महासंघले सवै प्रदेशमा थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत संघ स्थापनार्थ सम्भाव्यता अध्ययन एवंम संघको नमुना विनियम र संचालन कार्यविधि तर्जुमा गरेको छ ।
संघ स्थापनार्थ वागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश र प्रदेश नं. १ मा सहकारी संघ संस्थाका वीच अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रमको संचालन महासंघका संचालक शिव डागीले गरेका थिए । महासंघका संचालक गणेश ढकाल एवंम लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य सोमवहादुर श्रेष्ठ सहित विशिष्टीकृत संघका संचालक समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहकारी कानुन : नेताकै सहकारीमा पालना छैन ...
हाम्रो सगरमाथा सहकारीको सञ्चालक अवैधानिक ...
गृहमन्त्री संग खोप माग्दै सहकारीकर्मी ...
सहकारी प्रवद्र्वन कोषमा ३ वर्षमा ४ करोड जम्मा ...
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको डेढ अर्व खर्च भएन ...